🥇 ▷ Ku raaxayso nus-saac kala badh ciyaarta Astral Chain gameplay ✅
Ku raaxayso nus-saac kala badh ciyaarta Astral Chain gameplay
Ciyaar ficil PlatinumGames ah had iyo goor waa dammaanad shaki kuma jiro in isticmaaleyaasha Switch Rajaynayaan imaatinka 30ka Ogosto si ay fursad ugu helaan Silsiladda astral, cinwaan waxaa haga Takahisa Taura laftiisa, naqshadeeyaha guusha iyo caanka ah NieR: Automata. Haddii ay dhacdo in sugitaanku aan loo arkin mid weligeed sii socota, kooxda horumarinta ayaa go’aansaday in ay quudiyaan hype iyaga oo shaaca ka qaaday ciyaar-cusub oo qaab dhismeedka ciyaaraha 2019.
Maanta, Nintendo UK ayaa shaaca ka qaaday muuqaal cusub oo in ka badan 30 daqiiqo ah ciyaarta ciyaarta Silsiladda astral, ciyaarta cusub ee PlatinumGames ay diyaar u tahay Nintendo Switch. Qalabka waxaa ku jira agaasimaha gaarsiinta, Takahisa Taura, oo shaaca ka qaaday faahfaahinta halka falku ka dhacayo shaashada. Sida iska cad, ahaanshaha ciyaar ficil oo leh shaashadda istuudiyaha Jabaan, dagaalka ayaa u muuqda mid cajiib ah oo fiidiyowgan wuxuu u adeegsaday muujinta howlgalka Legion, nooc ka mid ah hubka nool ee noo oggolaanaya inaan u yeerno hay’adaha xilliyada dagaalka qaarkood, iyagoo na siinaya fursadda lagu ballaarinayo dib-u-celinta ee weerarada oo leh xulashooyinka sida Seefta, Arrow, Beast, Arm iyo Axe. Ka sokow muuqaalkeeda, dagaalka wuxuu mudnaanta siinayaa adeegsiga combos wuxuuna qiimeeyaa awooda ciyaaryahanka, marka waxaad filan kartaa shahaado dhamaadka heerka tirinta waxqabadkaaga.
Sidoo kale, fiidiyowga leh ciyaarta ciyaarta Silsiladda astral Waxay muujineysaa baaxadda weyn ee muuqaallada iyo fursadaha ay kuwan soo bandhigaan maxaa yeelay waxaa jiri doona habab kala duwan oo ay tahay in la qaado, marka lagu daro xaqiiqda ah in macluumaadka ku saabsan qodobbada qaarkood lagu tilmaami doono shaashadda, in kasta oo aan gebi ahaanba la geyn si aysan u burburin. xorriyadda ciyaaryahanka iyo wuxuu ku dhiirrigeliyaa inuu ogaado, sidaa darteed Sida aad fiiro gaar ah u siiso.
Waxbadan kaaga sheegi mayno fiidiyowga, ku raaxayso:
Silsiladda astral waxay ku bilaaban doontaa Nintendo Switch On Ogosto 30 oo xiriirkan waxaad ka heli doontaa dhammaan macluumaadka la xiriira cinwaanka la filayo ee PlatinumGames.
La soco, LEVEL UP.